Posted by Tranquillus | Agoosto 15, 2020 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
La wareejiso ogeysiis la'aan muddada uurka. Waa macquul?
Caadi ahaan, shaqaale u qaata xisbiga inuu kaligiis joojiyo qandaraaskiisa shaqada. Waa inuu xushmeeyaa muddada ogeysiinta sharciga ah. Tani waxay u oggolaaneysaa loo shaqeeyihiisa inuu abaabulo beddelaadiisa. Xaaladaha badankood, muddo bil ah ayaa la siiyaa dadka aan maareeyayaasha ahayn. Hoggaamiyaha, muddada ayaa badanaa lagu kordhiyaa saddex bilood.
Waxaad hadda uun ka baratay dhacdada farxadda leh. Waxaad si adag uga go'an tahay inaad bedesho sanduuqyada. Qorshe aan la fahmi karin, saacado aan la bixin, fasax fasax ah. Xaalad musiibo ah oo kugu anfacaysa anshax ahaan.
Qodobka L1225-34 ee Xeerka Shaqada wuxuu qeexayaa in shaqaale ku jira xaalad uur muuqata oo caafimaad ahaan la caddeeyay. Xaq u leeyahay inuu iskiis isaga casilo ogeysiis la'aan. Bixitaan leh saameyn deg deg ah. Hadaad doorato. Maheli doontid wax magdhow ah ee joojinta heshiiska shaqada si aad u siiso loo shaqeeyahaaga.
Si kastaba ha noqotee, la soco in tani ay noqonayso bixitaan aan la soo noqon. Haddii ay dhacdo in aysan suurtagal ahayn in si kale la sameeyo. Diyaar ayaad u noqon laheyd inaad booskaaga baneyso. Taabadalkeed, sug ilaa aad fasaxa umusha ku jirtid. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad mudnaanta koowaad siiso 12 bilood oo isukeenid ah. Waxaad ka faa'iideysan kartaa oo keliya qalabkan haddii aad baxdo inta aad uurka leedahay. Adiga ayay kugu jirtaa inaad miisaamto wanaagga iyo khasaaraha.
Tusaale warqad ah inaad iska joojiso ogeysiis la'aan inta aad uurka leedahay.
Sharciga kuma qasbayo, markaad haysato shahaadad caafimaad oo caddaynaysa. In loo isticmaalo hab gaar ah oo lagu joojiyo markaad uurka leedahay. Waxaad ku farxi kartaa kaliya taleefan wicitaan. Laakiin si looga fogaado wixii khilaaf ah. Waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho warqad ay ku qirayaan risiitka. Waad ka faa iidaysan doontaa inaad dirto emaylkan. Si aad u codsatid bixinta dheelitirkaaga koonto kasta, iyo waliba shahaadada shaqada oo ay weheliso shahaadada Pôle Emploi. Waxaa suurto gal ah inaanan ka mahadcelineynin habkaaga oo aan kaa codsanay inaad timaadid si aad iyaga u hesho. Loo-shaqeeyahaagu kuma khasbana inuu kuu soo diro.
Tusaalaha xarafka lambar 1
Magaca hore Magaca awoowe
Mawduuca: Waraaq is casilaad la'aan ogeysiis
Waan ka xumahay inaan kugu wargaliyo halkan go'aankeyga iscasilaad.
Fadlan la soco in iscasilaadaydu ay dhaqan galayso isla markiiba. Xaqiiqdii, xaaladdayda uurka ee muuqata waxaa markhaati ka ah caddaynta caafimaadka ee aan warqaddan kuugu soo dirayo. Iyo iyadoo la raacayo qodobbada qodobka L1225-34 ee Xeerka Shaqaalaha.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ka faa’iideysto fursadda la ii siiyay inaan ka tago shaqadayda iyadoon dib u dhac dhicin. Iyo iyada oo aan la bixin magdhowga joojinta qandaraaskayga shaqo.
Sidaa daraadeed waxaan kuugu baaqayaa inaad si dhakhso leh iigu soo dirto dhammaan dukumiintiyadii aan u baahnaan lahaa. Risiidkayga dheellitirka ee koonto kasta, shahaadada shaqada, iyo waliba shahaadada Pôle Emploi.
Mahadsanid, fadlan aqbal, Madam, muujinta tixgelinteyda ugu sareysa.
Tusaalaha xarafka lambar 2
Ujeeddo: Waraaq iscasilaad la'aan ogeysiis la'aan
Waa murugo markaan ku dhawaaqayo go'aankeyga inaan iska casilo ogeysiis la'aan. Kadib 15 sano oo aan ku jirnay kooxdeena. Waqti noloshayda ah oo igu reebi doonta xusuus wanaagsan.
In kasta oo ay jiraan wax walba, hadda waan bartay oo waxaan ka shakisan ahay inaan uur leeyahay. Dhakhtarkayga waxaan u sameeyay caddeyn caafimaad oo uur leh. Diiwaangalso inaan kaa helo lifaaq.
Sidaad ogtahay, qasab kuma ahan inaan ixtiraamo waqti ogeysiis ah. Xaalkeygu wuxuu ii oggolaanayaa inaan si dhakhso leh uga tago shaqadayda.
Tani waxay ii oggolaaneysaa hadda inaan naftayda naftayda u geliyo tiro isku-hagaajinno ah nolosheyda shakhsi ahaaneed.
Waad ku mahadsan tahay sida ugu dhakhsaha badan ee aad ii soo dirto. Dukumiintiyada la xiriira joojinta qandaraaskeyga shaqaaleysiinta.
Waxaan kuu rajeynayaa maalin wanaagsan, fadlan aqbal Sir, muujinta tixgelin ixtiraam leh.
Download "Warqada iscasilaada ogeysiis la'aan 1"	warqad-is-casilaad-la'aan-ogaysiis-1.docx - La soo dejiyay 343 jeer - 13 KB
READ Sababaha looga fogaado khaladaadka higaada shaqada
Download "Warqada iscasilaada ogeysiis la'aan 2"	warqad-is-casilaad-la'aan-ogaysiis-2.docx - La soo dejiyay 362 jeer - 13 KB
Dib ula wareego ogeysiis la'aan, xuquuqda haweenka uurka leh Febraayo 13, 2022Tranquillus
horeKu wargeli bixiyahaaga fasaxa umusha ee loo shaqeeyahaaga
socdaBaro sida loo hubiyo khadkaaga lacagta